नीतिकथा : उपहासको नतिजा | Ratopati
नीतिकथा : उपहासको नतिजा
personबालसंसार डेस्क exploreकाठमाडौं access_timeमंसिर २३, २०७८ chat_bubble_outline0
कतिपय मानिसमा अरूको उपहास गर्ने बानी हुन्छ । हिजोआजक सायद यसलाई प्र्याङ गर्ने भनिन्छ क्यारे । अरूको उपहास गर्दा गर्नेलाई एकछिन मजै होला, मजा हुने भएर नै गरेका होलान् तर यो राम्रो भने होइन । यही बानी नै एक दिन आफ्नै उपहासको कारण बन्न पुगिरहेको हुन्छ । तलको कथाले हामीलाई यही सन्देश दिन्छ ।
धेरै पहिले कुनै जङ्गलमा एउटा धूर्त स्याल बस्थ्यो । अरूलाई मूर्ख बनाएर मजा लिने उसको बानी थियो । ऊ हरेक समय यस्तै ताकमा रहन्थ्यो । मौका कुरेर बस्थ्यो, कुनै नयाँ जनाबर देख्ने बित्तिकै कुनै न कुनै जुक्ति निकालेर मूर्खताको जालमा फसाउने गथ्र्यो । कुनै बेला लामो समयसम्म कसैलाई मूर्ख बनाउन पाइएन भने न निद्रा लाग्थ्यो न खानाको स्वादै पाउँथ्यो । एवंरीतले उसले त्यस जङ्गलका सबै जनाबरलाई मूर्ख बनाइसकेको थियो, जसले गर्दा त्यहाँका जनाबर कसैले पनि उसलाई अविश्वास गर्ने मात्र होइन सङ्गतै गर्न छाड्दै गएका थिए ।
त्यसपछि उसको बेचैनी बढ्दै जान थाल्यो । उसको बानी थियो कसैलाई मूर्ख नबनाई चैनको निदै नआउने, समाजको अवस्था थियो कसैले पनि फुटेको आँखाले नहेर्ने । जहाँ पनि जान्थ्यो त्यहाँका जनाबरहरू कि उठेर हिड्थे कि वास्तै गर्दैनथे तर ऊ पनि चानचुने भने थिएन । कुनै न कुनै जुक्ति निकालेर नयाँ साथी खोज्थ्यो र केही समय सङ्गत गरी मूर्ख बनाउने गथ्र्यो ।
समय बित्दै गयो उसको अभियान पनि जारी नै रह्यो । एक दिन नयाँ साथी खोज्दै खोलाको किनारतिर डुलिरहेको बेला एउटा सारसलाई देख्यो । उसका लागि सारस नयाँ थियो । उसले यस अघि यस्तो प्राणी देखेकै थिएन । सारसलाई देख्ने बित्तिकै उसले अर्को मुर्गा फेला परेको ठान्यो र मुख मिठ्याउँदै नजिक गएर सोध्यो–
‘मित्र ! यस ठाउँमा नयाँ जस्तो लाग्छौ नि हो ?’
सारसले छड्के आँखाले हेर्दै भन्यो–
‘किनकि यस अघि यता कतै देखे जस्तो लाग्दैन ।’
‘हो, ठीक भन्यौ, यस स्थानका लागि नयाँ नै हुँ ।’
‘आफैँ त एक्लै भनौँ ।’
‘नयाँ स्थानमा एक्लै बस्न गाह्रो पर्दैन ?’
‘के गर्ने त खोइ, भरखरै आएको छु ।’
‘यो स्थान त्यति राम्रो छैन, कसैले एक्लो थाहा पाए भने दुःख दिन सक्छन् बुझ्यौ ?’
‘हो त नि ।’
‘के तैपनि ?’
‘यही कि नयाँ छु, को साथी खोज्न जाने भनेको नि ।’
‘किन चिन्ता गर्छौ ? चाहन्छौ भने मै साथी बनिदिउँला नि । यस अघि पनि तिमीजस्तै अकालमा परेका धेरैलाई सहयोग गर्दै आएको छु । पुरानो बासिन्दा हु । मेरो साथमा देखेपछि कसैले पनि दुःख दिने आँट गर्ने छैनन् ।’
सारस सिधा थियो । स्यालको धुत्र्याईँ बुझ्न सकेन र सहमति जनायो । त्यसपछि उनीहरूले त्यही सिर्सिरे खोलालाई साक्षी राखी मीत लगाए । स्याल घनिष्ठ मित्रको अभिनय गर्दै नयाँ नयाँ कथा सुनाउने गथ्र्यो सारस लठ्ठ पर्दै उसकै अघिपछि हिड्ने गथ्र्यो । माछो जालमा परिसकेको बुझेपछि स्यालले एक दिन घरमा भोजनको निम्तो दियो । सारस पनि खुसी हुँदै केही उपहार लिएर उसको घर पुग्यो ।
स्यालले खुसी हुँदै सारसलाई भित्र लगेर पिर्कामा राख्यो र थालमा ताततातो खिर पस्केर ल्यायो । तातो खिर देखेर सारसको मुख रसायो तर उत्तानो थालको खिर खाओस कसरी । उसका अगाडि टुलुटुलु हेरेर बस्नुको विकल्प थिएन । स्याल यस्तै मौकाको प्रतीक्षामा थियो । मनमनै खुसी हुँदै आफ्नो भागको खिर खाइसक्यो र भन्यो–
‘ओ हो ! मित्रले त अझै खान सुरू गरेकै रहेनछ, मन परेन कि कसो ?’
सारसले अहिलेसम्म स्यालले आफूलाई मूर्ख बनाउन बोलाएको रहेछ भन्ने बुझिसकेको थियो तर त्यसको छनक भने दिएन र कुरा बनाउँदै भन्यो–
‘त्यसो होइन मित्र ! खिर मीठै बनाउनु भएको रहेछ तर के गर्ने हेर्नुस् न अहिलेको अहिल्यै के भएछ कुन्नि जोडले पेट दुख्न लाग्यो ।’
त्यसपछि सारस खिन्न मनले विदा मागेर घरतिर लाग्यो । स्याल भने उसलाई मूर्ख बनाउन पाएकोमा दङ्ग पर्दै बस्यो । बिस्तारै सारसले खिरको सम्झना बिर्सँदै गएको भए पनि अपमानलाई बिर्सन सकेको थिएन । त्यसैले ऊ स्यालसँग बदला लिने योजना बनाएर बस्यो ।
केही दिनपछि सारसले स्याललाई आफ्नो घरमा भोजनको निम्तो दियो । तोकिएको दिन स्याल खुसी हुँदै सारसको घरमा निम्तो मान्न गयो । सारसले पनि उसका लागि खिर नै बनाएको रहेछ । उसले स्याललाई भित्र बोलायो र गुद्रीमा बसाएर खिर पस्कन लाग्यो । खिरको वासना आउने बित्तिकै स्यालको मुखबाट ¥याल चुहिन थाल्यो तर खान भने पाएन । किनकि खिर सुराहीमा पस्केर ल्याइएको थियो । एउटा सुराही स्याललाई दिएर आफू आफ्नो भागको खिर खान थाल्यो तर स्याल भने हेरेको हे¥यै भयो ।
सारसले पनि स्यालले जस्तै आफ्नो भागको खिर खाइसक्यो र ऊतर्फ फर्कदै भन्यो–
‘ओ हो मित्रले त अझै खान सुरू नै गरेका रहेनछन्, मीठो लागेन कि कसो ?’
विचरा स्याल के गरोस् । मनमनै विगतलाई सम्झदै भन्यो–
‘त्यसो होइन मित्र ! खिर मीठो छ । अस्ति तिमीलाई जस्तै मलाई पनि अहिलेको अहिल्यै के भयो कुन्नि अचानक पेट दुखेर आयो ।’
यति भन्दै स्याल खिन्न मन लिएर भोकभोकै घर फक्र्यो र त्यस दिनदेखि कहिल्यै यस्तो गर्ने हिम्मत गरेन । भनाइ नै छ नि अरूलाई एउटा औँलो देखाउँदा चारवटा औँलो आफैँतर्फ फर्किरहेको हुन्छ ।
कसरी बचाउँथे वैदिक महर्षिहरू मरेका मानिसलाई ?
नीतिकथा : कमिलाको बुद्धि
नीतिकथा : अतिले गराएको खती
वैदिक कथा : किन मारिए शम्बरहरू ?